Xaaladda welwelka ee baarista machadka SOM Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaaladda welwelka ee baarista machadka SOM Göteborg
La cusbooneeyay tisdag 25 april 2017 kl 14.55
La daabacay tisdag 25 april 2017 kl 10.43
Cabdi Faarax: Kolka ay saxaafaddu argaggixisada ka hadlayso ayaan ka wewelaa
MRSA bakteeriyada adkeeysiga u leh antibiyootikada. sawir: Poppe, Cornelius
Welwelka laga qabo kororka uu jeermisku u qabo u dulqaadashada dawada antibiootikada ayaa kaalinta koowaad ka gashay waxyaabaha ay bulshada Sweden welwelka ka qabaan mustaqbalka, sida ku cad baarista machadka ee jaamicadda Som-institutet Göteborg.
Shan waxyaalood ayaa kaalinta ugu sarreeysa ka galey waxyaabaha ugu waaweyn ee welwelka ku haya bulshada, mar su’aallo laga weeydiiyey dadyoow si kama’ ah loo soo xuley ee tiradoodu gaarsii-san tahay 20 0000 oo dalka ka diiwaan-gashan.
Argagixisada, waxyeellada iyo is-bedelka cimillada oo sannadkii hore kaalinta ugu sarreeysa kaga jirey waxyaabaha welwelka laga qabay ayey iminka ku soo biireen cabsida laga qabo adkeeysiga bakteeriyadu u leedahay antibiootika oo kor u sii kacda iyo sidoo kale kor u kaca isir naceeybka.
Waana fikir uu middaa ku raac-san yahay welwelna ku haya kor u kaca isir neceeybka ee dalka Cabdi Faarax ahna aabbe iyo dukaanle ku dhaqan magalada Örebro.
Cabdi Faarax ayaa sidoo kale welwel ka qaba sida uu noo sheegay mar uu wareeysi siiyay laanta idaacadda ee soomaaliga habka saxaafaddu wax u dhigto kolka ay ka hadleeyso falalka argagixisada oo buu sheegay loo nasiibeeyo islaamka.
Su’aal gaar ah ee baarista sannadka la soo ban-dhigi doono ayaa la xiriirta aragtida laga qabo hoggaamiyeyaasha waaweyn ee caalamka sida Donald Trump, Vladimir Putin iyo Angela Merkel.
Baarista Som-institutet ee jaamicadda Göteborg ayaa la sameeyey muddadii u dhexeeysay bilaha septeember-feeberaayo.
Waraaqaha su’aalaha lagu weeydiiyey ayaa boosto loogu kala direy dadyoow da’doodu u dhexeeyso 16-85-jirro oo gaarsii-san 20 000 oo ruux ee si lama filaan ah loo doordoortey. Waxey sidoo kale ku soo jawaab celin kareen aaladda internet-ka.